कसरी तपाईंको पत्राचार सूची सदस्यहरू तपाईंका बारम्बार समाचारपत्र कार्य प्राप्त गर्न
पोस्ट: Fisayo फेब्रुअरी 16, 2018
पढ्न र आफ्नो इमेल इनबक्समा बुझाइएको सबै सन्देशहरू कार्य गर्छन्? तपाईंले तिनीहरूलाई पढेर बिना इमेल सन्देशहरू मेटाउने लागि चिनो यदि तपाईं ठूलो उत्पादन प्रस्तावहरू र व्यक्तिगत सन्देशहरू बञ्चित छैन? तपाईं आफ्नो लक्ष्य दर्शक पुगन आफ्नो प्रमुख माध्यम रूपमा इमेल मार्केटिङ प्रयोग इन्टरनेट उद्यमी छन्? तपाईं प्रयोग गरेर राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ पल्स पठाउन.
सबै गम्भीर इन्टरनेट बजार समाचारपत्र पठाउन. इमेल मार्केटिङ प्रक्रिया मार्फत, डिजिटल उद्यमीहरू आफ्नो पत्राचार सूची भित्र संभावित ग्राहकहरु गर्न आफूलाई बजार बारम्बार समाचारपत्र प्रयोग. आफ्नो सदस्यहरू पुग्न सबैभन्दा प्रत्यक्ष बाटो इमेल मार्केटिङ मार्फत व्यक्तिगत समाचारपत्र पठाउँदै छ. समस्या तथापि त्यो भन्दा इमेल सदस्यहरू मार्केटिङ इमेल खोल्न छैन छ; र इन्टरनेट बजार त्यसो सदस्यहरू संख्या थाहा छैन.
SendPulse प्रविष्ट. यो तपाईंको समाचारपत्र मा तपाईं आफ्नो सदस्यहरू पढ्न प्राप्त गर्न सक्छन् जो मार्फत डिजिटल उपकरण र कार्य हो. आफ्नो इमेल सूची प्राप्त परे आफ्नो समाचारपत्र प्रतिक्रिया, SendPulse तपाईंको सन्देशहरू तिनीहरूले जहाँ आफ्नो लक्ष्य दर्शक पुग्न सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको छ, सबै समय मा, र बिना असफल. तपाईं आफ्नो सदस्यहरू को टेबल मा पैसा छोड्न चाहनुहुन्छ भने, SendPulse सिफारिस उपकरण तिनीहरूलाई घडी तपाईंलाई तिर्ने गर्न छ.
SendPulse तीन प्रमुख तरिकामा आफ्नो इमेल मार्केटिङ आवश्यकता सेवा गर्न निर्माण गरिएको छ. तिनीहरू यहाँ छन् -
वृद्धि क्लिकथ्रू इमेलहरू
यो तपाईं आफ्नो लक्ष्य दर्शक पुग्न भरपर्दो इमेल मार्केटिङ अभियान भर भनेर रेकर्डमा पहिले देखि नै छ. तर SendPulse तिमी अगाडी मद्दत गर्छ. यसलाई आफ्नो सदस्यहरू थप तिनीहरूलाई आफ्नो इमेल र कार्य खोल्न सुनिश्चित गर्दछ 50% सफलता दर. जब आफ्नो समाचारपत्र सुनिरहेका सदस्यहरू संभावना अप गर्न द्वारा वृद्धि 50%, तपाईं थप पूर्व-बिक्री केही हुन सक्छ.
यहाँ तपाईंको इमेल मार्केटिङ अभियान लागि SendPulse प्रयोग को लाभ हो -
50% आफ्नो इमेल भएको वृद्धि संभावना खुलेको
SendPulse गरेको SMTP सर्भर प्रापकहरूसँग 'इमेल प्रोटोकल बिना आफ्नो इमेल को deliverability सुनिश्चित
इमेल उत्तरदायी बनाउन कृत्रिम बुद्धि, खुला इमेल मा तथ्याङ्क संग, र विशेष मिति मा इमेल पठाउनका लागि अनुसूचक.
वेब पुश सूचनाहरू
वेब पुस सूचना सबै उपकरणहरू तिनीहरूले इमेल लग इन वा छैन कि आफ्नो सदस्यहरू पुग्न एक विकल्प छ. यो तपाईं साँच्चै व्यक्तिगत सन्देशहरू आफ्नो इमेल इनबक्समा populating बिना आफ्नो पत्राचार सूची सदस्यहरू पहुँच प्रदान. वेब पुस संग, उनीहरूले इन्टरनेटमा जडान भएका छन् हुँदा पनि महत्वपूर्ण अद्यावधिक आफ्नो सदस्यहरू सूचित गर्न सक्नुहुन्छ.
SendPulse सूचना प्रविधि पुस आफ्नो उपकरणहरू र ब्राउजर बिना सन्देशहरू संग सदस्यहरू पुग्न डिजाइन गरिएको छ. परम उद्देश्य आफ्नो ग्राहकहरु मार्फत तपाईंको सन्देशहरू प्राप्त र तिनीहरू फेला तिनीहरूलाई अवस्था जस्तोसुकै यो कार्य गर्न प्राप्त छ. वेब सूचनाहरू इमेल इनबक्स overcrowd छैन, अझै सदस्यहरू तिनीहरूलाई प्राप्त र तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत सन्देशहरू संग verifiable क्लिकथ्रू दर प्राप्त.
त्यहाँ थोक एसएमएस पठाउनका लागि त्यहाँ बाहिर विभिन्न प्रणाली हो, तर SendPulse ती सबै trumps. SendPulse गरेको थोक एसएमएस प्रविधि संग, तपाईं हजारौं पठाउन सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत सन्देशहरू आफ्नो मोबाइल फोन मा आफ्नो ग्राहकहरु. जहाँ आफ्नो सदस्यहरू आफ्नो समाचारपत्र पुस सूचनाहरू पढ्न वा प्राप्त गर्न आफ्नो इमेल लग इन गर्न सक्षम छन्, तपाईं कुनै पनि मुद्दा बिना एसएमएस पठाउन सक्नुहुन्छ. एकल क्लिकमा, तपाईं आफ्नो सदस्यहरू हजारौं गर्न नै अनुकूलित पाठ सन्देश पठाउन र यो लगभग एउटै समय र क्षण मा आफ्नो मोबाइल फोन वितरित हुन सक्छ.
तपाईं अरू के थाहा छ पर्दछ SendPulse बारे?
SendPulse इन्टरनेट बजार प्रस्ताव धेरै र अन्य साना व्यवसायहरू छ. यी केही छन् -
समाचारपत्र लागि इमेल टेम्प्लेट सयौं अनुकूलन क्षमता
विशेष मिति मा दिइएको इमेल पठाउनका लागि अनुसूचक
वेब आगंतुकों 'इमेल सङ्कलन लागि सदस्यता फारम
इमेल खुला दर नाप्ने लागि विश्लेषण, क्लिक लिंक साथै सदस्यहरू स्थान
विभिन्न सीएमएस र इकमर्स मञ्चहरूमा सजिलो एकीकरण
सम्म पठाउन स्वतन्त्रता 15,000 प्रति महिना निःशुल्क अनुकूलित इमेल
अनलाइन बजार सबै विभाग को आवश्यकता पूरा सम्म SendPulse जमीन देखि बनाइएको थियो. यो बजार लागि बजार द्वारा ईन्जिनियर थियो, र यसको एकीकृत कृत्रिम बुद्धि सहज लक्षित कार्यहरू गर्न सदस्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम छ. SendPulse हरेक उद्यमी सुधार व्यापार अनुभव लागि आज सक्रिय हुनुपर्छ नयाँ पैसा बनाउने उपकरण छ; अनि तेस्पछि, यसलाई कुनै पनि लुकेका दायित्व बिना सबै प्रयोग गर्न लागि निःशुल्क आउँछ.
टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस् मा "पल्स पठाउन: कसरी तपाईंको पत्राचार सूची सदस्यहरू तपाईंका बारम्बार समाचारपत्र कार्य प्राप्त गर्न"